04 July, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Xeer uu soo saaray madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele (Xaaf), waxa uu ku sheegay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ay hoggaamineyso geeddi socodka Dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka Galmudug.
Sababta uu go’aankan u qataay waxa uu ku sheegay iney tahay mid uu uga gol leeyahay daadajinta baahida loo qabo xiligan iney si xowli ah ku socdaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka Dhuusa-Mareeb ka wada qabsoomaya.
Xaaf ayaa qiray in xiligan xaalad cakiran ay ka jirto Galmudug, si taa loogaga baxana ay lagama maarmaan tahay in howlaha socda ay horboodo Wasaarada arrimaha gudaha oo dowladda wakiil uga ah nidaamka federalka ee dalka ka jira.
Xeerkan oo uu u cuskaday qodobka 50aad farqadiisa 5aad ee Dastuurka Galmudug, ayuu ku shaaciyay in Hay’adaha Galmudug aaney saameyneynin shaqooyinkooda, ayna tahay iney sii dar dar geliyaan inta dowlad goboleed cusub laga soo dhisayo.
Si kastaba, Bayaankan ayaa imaanaya iyadda oo ra’iisul wasaare Khayre oo ku sugan degaanada Galmudug uu ka shaqeynayo dhameystirka Galmudug, isla markaana uu soo afjaray khilaafkii kala dhaxeeyay Xaaf, iyadoo lagu wado in saacadaha soo socda uu dib ugu soo laabto Muqdisho.
Sidoo kale warkan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadda oo shalay uu hogaamiyaha Galmudug uu magaala madaxda dalka ee Muqdisho kula kulmay xubno ka socda beesha caalamka, waxaana meesha isaga baxday go’aamadiisii adkaa ee uu ku sheegayay in fara gelin howlaha maamulkiisa ay ku heyso Xukuumada Soomaaliya.
KASHIFAAD: Hey'adda ICG oo ka digtay in xasarado ka dhashaan doorashiinka Soomaaliya